Webinar: COVID-19 ary ny antsinjarany - Tetikady azo ampiharina mba hampitomboana ny fampiasam-bolanao Cloud Cloud | Martech Zone
Tsy misy isalasalana fa ny indostrian'ny varotra dia nopotehin'ny aretin'ny COVID-19. Amin'ny maha mpanjifa Marketing Cloud anao dia manana fotoana tsy ananan'ny mpifaninana aminao ianao. Nanafaingana ny fananganana nomerika ny areti-mandringana ary hitombo hatrany ireo fihetsika ireo rehefa miverina ny toekarena. Amin'ity webinar ity dia hanome tetika 3 malalaka sy fandraisana andraikitra manokana miisa 12 izahay izay tokony hataon'izy ireo laharam-pahamehana anio - tsy ny hahatafavoaka azy fotsiny amin'ity krizy ity fa hivoatra amin'ny taona ho avy.
Miaraka amin'ny Salesforce sy Marketing Cloud's Sehatra sy fitaovana marobe sy be pitsiny maro karazana, ny mpanjifan'izy ireo dia manana tanjaka tsara lavitra noho izany hiatrika io tafiodrivotra ara-toekarena io. Highbridge manam-pahaizana momba ny fanovana nomerika (sy Martech Zonempanorina) Douglas Karr dia hanampy anao hahamatotra ny varotra nomerika anao ary hanova ny fampiasan'ny orinasanao rahona marketing hampitomboana ny fahazoana, hananganana lanjan'ireo mpanjifa ary hitazonana ireo mpanjifa sarobidy.
Amin'ity webinar ity dia hanome paikady 12 manokana izahay izay hanampy anao hampihena ny vidinao isaky ny fahazoana sy ny fanovana, hampitombo ny vola miditra isaky ny fandraisana anjara ary hanatsara ny ezaka ara-barotra nomerika amin'ny ankapobeny. Miaraka amin'ny webinar dia hanome lisitra sy loharanom-pahalalana miaraka amin'ireo loharanom-pahalalana ho an'ireo izay manatrika anao izahay.
Data - fandraisana andraikitra manadio, manaparitaka, manitsy ary manatsara ny angon-drakitrao ao amin'ny Marketing Cloud mba hampihenana ny fako sy hampitomboana ny fahombiazany.
Delivery - fandraisana andraikitra hamolavola sy handefasana hafatra ao amin'ny boaty, hialana amin'ny sivana junk ary hamaritana ny olan'ny ISP manokana.
Personalize - fandraisana andraikitra hampisaraka ny vinavinanao sy ny mpanjifanao, hanivana ary hikendry ny fampielezan-kevitrao ary hampanjifa manokana ireo fifandraisana.
fitsapana - fandraisana andraikitra handrefesana, hizaha toetra ary hanatsarana ny fifanakalozana marketing misy fantsona maro.
fahiratan-tsaina - mahatakatra ny fomba anampian'i Einstein ny mpivarotra hahita, haminavina, hanome soso-kevitra ary hamono ho azy ireo ny fifandraisana amin'ny varotra.
Highbridge manana seza vitsivitsy tavela ivelan'ny mpanjifany - ka raha liana ianao dia miangavy anao hisoratra anarana avy hatrany:
Iza no tokony hanatrika:
Ireo mpivarotra liana amin'ny fahatakarana ny fomba ahafahan'ny Marketing Cloud mitarika fidiram-bola ho an'ny orinasam-pivarotana na e-varotrao.
Ireo mpivarotra izay nampihatra ny Marketing Cloud saingy te ho be pitsiny kokoa amin'ny fizarana, ny personalization ary ny fanatsarana azy ireo.
Ireo mpivarotra izay nampihatra ny Marketing Cloud saingy te hampiditra ireo dia lavitra ataon'ireo mpanjifa sy fitsapana amin'ny ezak'izy ireo.
Ireo mpivarotra izay nampihatra ny dia nataon'ny mpanjifa ary te-hampihatra faharanitan-tsaina artifisialy hanatsarana ireo dia ireo.
Ny ekipa mpitarika ao amin'ny Highbridge manana mpitarika 40 taona mahery amin'ny fitarihana stratejika mpanatanteraka eo amin'ny sehatry ny varotra. Ny mpanjifany lehibe indrindra dia misy an'i Dell, Chase Paymentech, ary GoDaddy… saingy nanampy an-jatony ny fikambanana hanangana tondrozotra hanovana nomerika ny orinasan'izy ireo izy ireo. Ety ivelany, manampy ny orinasa hanova ny traikefan'ny mpanjifa izy ireo. Ao anatiny izy ireo dia manampy ny orinasa hivezivezy, hampiditra ary hanatsara ny sehatr'izy ireo mba hamoronana fomba fijery amin'ny ambaratonga 360 degre ho an'ny mpanjifany.